Orinasa fanaka any Etazonia
1 - 1 ny 1 lisitra
Modern Bathroom dia mpivarotra enta-madinika amin'ny fanavaozana ny trano fidiovana any amin'ny faritr'i Los Angeles. Satria atolotra amin'ny orinasa-ny vokatra avy any aminay, ny mpanjifa dia mitahiry hatramin'ny 70% amin'ny zava-poana ao an-trano fidiovana, faucets, sink ar...
Navoakan'i Modern Bathroom
View Orinasa fanaka Published 1 year ago
Ny fanaka dia manondro zavatra azo esorina hanohanana ny hetsika olombelona isan-karazany toy ny seza (ohatra, seza, seza, ary sofina), mihinana (latabatra) ary fatoriana (ohatra, fandriana). Ny fanaka dia ampiasaina koa amin'ny fitazonana zavatra amin'ny haingam-pandeha mety tsara ho an'ny asa (toy ny velarana miolikolika ambonin'ilay tany, toy ny latabatra sy ny latabatra), na ny fitehirizana zavatra (ohatra, boaty sy talantalana). Ny fanaka dia mety ho vokatra noforonina ary raisina ho toy ny zavakanto haingo. Ho fanampin'ny anjara asan'ny fanaka dia afaka mamorona tanjona ara-panoharana na ara-pinoana izy io. Mety ho vita amin'ny fitaovana maro, ao ny metaly, plastika, ary hazo. Ny fanaka dia azo atao amin'ny fampiasana karazan-javamaniry isan-karazany izay matetika taratry ny kolontsaina eo an-toerana.